Agaasimihii madaxtooyada HirShabelle ee isu dhiibay Al-Shabab oo ka soo laabtay - Awdinle Online
Agaasimihii hore ee Madaxtooyada HirShabeelle Xasan Cumar Axmed loona yaqaano Xasan Mahdi, ayaa markii ugu horreysay lagu arkay degaano ka tirsan HirShabelle tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu ka soo muuqday gacanta Al-Shabaab.
Dad ku sugan magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa Awdinle Online, u sheegay in Xasan Mahdi lagu arkay magaalada Beladweyne ee gobalka Hiiraan kadib markii uu ka soo laabtay degaanada Al-Shabaab oo uu ku sugnaa muddo ku dhow bil.
“Xasan Mahdi, waa ka soo laabtay Al-Shabaab iyo hadalkii uu ku sheegay in uu ka towba keenay shaqadii uu ku jiray ee dowladda waxaana loo soo fidiyay cafis” ayuu yiri masuul sare oo ka tirsan maamulka gobalka Hiiraan.
“Xasan Mahdi, waxa uu kamid ah yahay dad badan oo Al-Shabaab cafis u doontay kana soo laabtay isaga uguma horreeyo waa dhacday dad badan ayaa Al-Shabaab cafis u doontay” ayuu yiri masuulkaan aan la hadalnay ee ka tirsan maamulka gobalka Hiiraan.
Saraakiil ka tirsan Booliiska gobalka Hiiraan ayaa Caasimada Online u sheegay in aysan wali arkin Xasan Mahdi, laakiin ay soo gaartay xog sheegeysa in uu ka soo laabtay Al-Shabaab oo uu u doontay cafis sida ay hadalka u dhigeen.
Xasan Cumar Axmed, oo loo yaqaano Xasan Mahdi ayaa warbaahinta Al-Shabaab ka soo muuqday 3-dii September ee sanadkaan 2019, waxa uuna sheegay in uu ka towbad keenay shaqadii “riddada iyo gaalnimada” isagoo ay labadiisa dhinac taagnaayeen laba dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab
Previous articleSouth African public broadcaster to get $211 mln government bailout
Next articleWasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Oo Shir Uga Qeyb Galaya Switzerland